IPhone-kaagu ma damiyaa markuu wali leeyahay awood batteri? Halkan xalka | Wararka IPhone
Batariga farxadda leh ee iPhone-ka, inkasta oo uu tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib ah u socdo, iyo xitaa aaladaha Plus-ka ah waxay muujinayaan waxqabad aan caadi ahayn, haddana weli waxaa jira isticmaaleyaal badan oo ismaamulka iPhone-ku uusan ku filnayn. Laakiin intaas oo dhan maahan, sidoo kale waxaa suurtagal ah in IPhone-ka uu dansado marka sida ku cad tilmaamuhu uu wali leeyahay batteri. Tani waa mid dheeri u ah degganaansho la'aanta ismaamulka oo naga dhigi karta mid lumisa samirka Si kastaba ha noqotee, Actualidad iPhone-ka waxaan ku barinaa sida loo xalliyo qaladka ka dhigaya iPhone inuu damiyo marka uu wali leeyahay batteri.
Waxa ugu horeeya ee aan awoodno waa is deji oo samee waxa loo yaqaan "Hard Reset", Si tan loo sameeyo, waxaan riix doonnaa badhanka Awooda iyo badhanka Guriga muddo 5 ilbidhiqsi ah, iPhone ayaa damin doona oo si otomaatig ah u bilaabi doonaa. Isticmaalayaasha iPhone 7 nooc kasta oo ka mid ah noocyadiisa kala duwan, maadaama uusan laheyn badhanka guriga ee jirka, waa inay riixaan badhanka Power iyo badhanka Volume-ka si ay dib ugu bilaabaan qalabka.
Haddii hal maalin ka dib markaan fulino tan 'Hard Reset' batterigayagu uusan caadi ku soo noqon, waa inaan marka hore hubinnaa inaan shaqeyneyno nooca ugu dambeeyay ee deggan ee macruufka, markii la cusbooneysiiyo waxaan ku dallaci doonnaa qalabka. Hadda waanu ka taxadari doonnaa isticmaalkiisa illaa uu dami doono, laakiin halkaan ma ahaan doono, markii uu damco waxaan isku dayi doonnaa inaan shidno, iyo sidaas si joogto ah u sii wad ilaa ay mar dambe sameyn weydo. Hadda, Waanu ku shubi doonaa lacag, markay si otomaatig ah u bilaabatana waxaan ku ridi doonnaa "qaabka diyaaradda" mana isticmaali doonno illaa ay ka gaarto 100% baytariga, goorta aan ka jareynayno oo aan hubin doonno haddii aan weli dhibaato ku qabno xiritaan dhicis ah.
Haddii midkoodna xalkaani aanu shaqeyn, waa inaan dib ugu soo celino aaladda iTunes, sidan ayaa noqon doonta calibrate batteriga iPhone. Laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn, haddii ay sii socoto guuldarradu waxay ka dhigan tahay inaan cillad xagga qalabka ah ku leenahay batteriga, sidaas Waxaan la xiriiri doonnaa Apple si xal loogu helo ama loo hagaajiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » IPhone-kaagu ma damiyaa markuu wali leeyahay awood batteri? Halkan xalka
Haa, tan waxaa loo yaqaana inay hagaajinayaan baytariga Smartphone-ka ama IPhone-ka. Tani waxay igu dhacday aniga in la damiyay 15% waana isku dayay inaan sidan sameeyo runtiina waxay tahay inay hada socoto ilaa 1%.
Yahoo waxay xaqiijineysaa inay ka warqabtay weerarkii ay la kulantay 2014